Guddiga doorashada oo soo saaray farriin ku socota musharaxiinta madaxweyne - Caasimada Online
Home Warar Guddiga doorashada oo soo saaray farriin ku socota musharaxiinta madaxweyne
Guddiga doorashada oo soo saaray farriin ku socota musharaxiinta madaxweyne
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha ayaa war cusub kasoo saaray doorashada hoggaanka dalka oo beri oo Axad ah 15-ka May ka dhaceysa Teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Qoraal kooban oo kasoo baxay guddiga ayaa waxaa fariin loogu diray xubnaha musharixiinta ah, iyada oo laga dalbaday in musharrax kasta uu soo gudbiyo qof wakiil uga ah tiririnta codadka doorashada, xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya.
“Dhammaan Musharraxiinta Madaxwaynaha JFS waxaa laga codsanayaa in ay ka soo jawaabaan codsiga Guddiga Doorashada Madaxwaynaha oo ah in Musharrax kasta Guddiga u soo gudbiyo xubinta u tirinaysa codadka,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay guddiga.
Sidoo kale guddiga ayaa u qabtay musharixiinta inay ku soo gudbiyaan illaa 12:30am duhurnimo ee maanta, haddii kale aysan u suurta gelin in hoolka uu yimaado qofka wakiilka ah.
“Musharraxii ku soo gudbin waaya waqtiga loo qabtay uma suurta gali doonto in uu hoolka doorashada soo galo qofka la socda .FG: Waqtiga kamadanbaysta ah ee soo gudbinta magacyada waa 12:30am (duhurnimo) ee maanta,” ayaa markale lagu yiri qoraalka.
Dhinaca kale ammaanka ayaa aad loo adkeeyey, waxaan bandow lagu rogay caasimada, kaas oo bilaabanay 9:00 fiidnimo ee caada, sida uu shaaciyey Booliska Soomaaliya.
Tartanka doorashada ayaa ah mid aad u adag, waxaana ku loolamaya ku dhowaad 40 musharrax oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee dalka oo uu ku jiro Farmaajo.